DHAGEYSO: Xildhibaano kulan ka yeeshay go’aanka Golaha Wasiirada | Caasimada Online
DHAGEYSO: Xildhibaano kulan ka yeeshay go’aanka Golaha Wasiirada
Sep 6, 2017 - Comments off
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan deg deg ah waxa ay ka yeesheen go’aanka ka soo baxay Golaha Wasiirada Soomaaliya, kaasi oo lagu sheegay in C/kariin Qalbi-Dhgax uu ahaa nin Argagixiso ah, loona dhiibay Dowladda Itoobiya.
Xildhibaanada kulanka yeeshay ayaa waxaa ka mid ah Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, Xildhibaan Zakariye iyo Xildhibaan Axmed Xaashi oo ka tirsan Baarlamaanka Aqalka Sare.
Kulankooda kadib ayay warbaahinta la hadleen, xildhibaan Zakariye oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in maalmahanba ay raadinayeen cida dhiibtay Qalbi-Dhagax, balse maanta ay la yaabeen go’aanka Golaha Wasiirada, kaasi oo sheegayay in Dowladda Itoobiya ay ku wareejiyeen Qalbi-Dhagax, shacabkana arintaasi ay ku reebtay shucuur gaar ah.
Dhanka kale Xildhibaan Mahad Salaad oo Golaha Wasiirada ay ku sheegeen in uu qeyb ka ahaa heshiis la saxiixay 2dii May 2016 oo ay Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda Federaalka Ethiopia ku heshiiyeen in ay si wadajir ah isaga kaashadaan la dagaallanka nabad-diidka iyo argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasilloonida labada dal ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxa arrimahaasi ka jira.
Wuxuu sheegay Mahad Salaad in arrimahaasi ay waxba kama jiraan yihiin, basle heshiiska uu quseeyay arrimo colaadeed oo ka dhacay gobolada Qoraxay iyo Galgaduud oo ka kala tirsan Ismaamulka degaanka Soomaalida Itoobiya iyo Galmudug.
Sidoo kale wuxuu sheegay xildhibaanka colaadaasi awgeed in beel ahaan ay ku tageen magaalada Jigjiga isaga iyo Odayaal waxgarad ah iyo masuuliyiin kale, halkaasi oo uu sheegay in ay kula kulmeen maamulka Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya iyo saraakiil Itoobiyaan ah, ayna wada saxiixdeen 8 qodob oo dhamaantood quseeyay colaada halkaasi ka dhacday.